Muxuu ahaa hadalkii hanjabaadda ahaa oo uu Gareth Bale u sheegay saaxiibadiisa kooxda Intii lagu jiray qolka labiska? – Gool FM
(Madrid) 20 Maajo 2019. Weeraryahanka Real Madrid Gareth Bale ayaa saaxiibadiisa kooxda u sheegay inuu kaliya maamulka ka dalban doono mushaarkiisa saddexda sano, hadii aysan fursad u siinin iney ciyaarsiiyaan.
Xiddiga reer Wales ayaan shalay kasoo muuqan kulankii ugu dambeeyay horyaalka La Liga, Los Blancos ayaana qasaaro 2-0 ah ka qaadatay Real Betis kulan xiddigaan uu kursiga keydka ku dhameystay.
Ka hor kulankii Real Betis ayuu saaxiibadiisa qolka labiska kula hadlay wuxuuna u sheegay qorshaha uu damacsan yahay inuu halkaas kusii joogo.
“Waxaan heystaa qandaraas saddex sano ah, hadii ay doonayaan inaan baxo, waxey u baahan yahiin iney i siiyaan 17 Malyan oo Yuuro fasalkiiba” ayuu yiri Gareth Bale oo saaxiibadiisa lahadlaayay sida ay xog ku ogaatay Radio Estadio.
Gareth Bale sida muuqata maahan dooqa Zinedine Zidane, 29-jirkaan ayaana heysta fursad aad u liidata si usii joogo kooxda caasimadda, balse isaga wuxuu ku adkeysanayaa sida lagu soo xan warramay inuu kooxda sii joogo.
Taageerayaasha Real Madrid oo doortay ciyaartoyda ay u arkaan in laga fasaxo kooxda suuqa xagaaga